ရှေးအချိန်ကတည်းကစပါးသည်ဖိလစ်ပိုင်အစားအစာ၏အဓိကအစားအစာဖြစ်သည်,ဖိလစ်ပိုင်၌ဆန်စက်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်ရှိဆန်စက်လုပ်ငန်းစတင်ရန်ခြေလှမ်းများကိုသိလိုပါ? အခြားမည်သည့်ကောက်ပဲသီးနှံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မဆိုကဲ့သို့, ဒီဖြစ်ပျက်စေရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်. ဆန်စက်ကြိတ်စက်ကိုလယ်သမားများအတွက်စပါးကိုပြုပြင်ရန်စတင်ပါသို့မဟုတ်သင်၏ဆန်သောဆန်ဖြူကိုရောင်းရန်ဆန်စက်စက်တစ်ခုတည်ထောင်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများရှိသဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုမီရွေးချယ်စရာများကိုသေချာစွာချိန်သင့်သည်။.
မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စမရှိပါ , လိုင်စင်နှင့်စီးပွားရေးပါမစ်များရယူရန်လိုအပ်သည်.
ကျေးလက်ဒေသရှိအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ပိုမိုကြီးမားသောမော်ဒယ်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဆန်ကြိတ်စက်ကိုဒုတိယအကြိမ်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဤသည်မှာတရုတ်နိုင်ငံမှ 6LN15 မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ အကျိုးအမြတ်ရှိနိုင်သည့်အကြောင်းကောင်းတစ်ခုမှာကြိတ်ခွဲစက်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ၏မြင့်မားသောကြိတ်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်း 68.1 ရာခိုင်နှုန်း. ဆိုလိုတာက၊ 100 စပါးကီလိုဂရမ်ကြိတ်ခွဲ, 68.1 ထိန်ထားသောကီလိုဂရမ်ကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးသည်။ ဆန်စက်၌သန့်ရှင်းသောစက်ရှိသည် ,စက်မှတ်မိ, ဆန်ဖွဲခွဲစက်, ဆန်စက်,ဆန်တွန်းစက်. ထို့ကြောင့်ကြိတ်ခွဲထားသောဆန်သည်အလွန်သန့်ရှင်းသည်။ ၎င်းကိုလူတစ် ဦး တည်းသာလုပ်ကိုင်နိုင်သည်.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ဆန်စပါးလုပ်ငန်းငယ်များကိုလက်ခံရန်ဂရုမစိုက်သောပမာဏသေးသောလယ်သမားငယ်များထုတ်လုပ်သည့်ရပ်ကွက်တစ်ခုတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်. အသေးစားလယ်သမားများသည်ရိတ်သိမ်းနိုင်ပြီးစီးပွားဖြစ်ဆန်နှင့်အတူတူရောင်းနိုင်သည်, သူတို့သိသိသာသာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်. များစွာသောလယ်သမားများသည်ရိတ်သိမ်းကြသည် 120 တစ်ဟက်တာကနေ palay ၏မြည်း. သူတို့တစ်ကီလိုလျှင် P17 မှာ palay ရောင်းလျှင်, စုစုပေါင်းဝင်ငွေ P102,000 ဖြစ်လိမ့်မည်. သို့သော်၎င်းတို့သည်ရိတ်သိမ်းချိန်ရှိပါက 6LN15 စပါးဆန်စက်မှရိတ်သိမ်းနိုင်သည်, သူတို့စုစုပေါင်းရပါလိမ့်မယ် 3,900 ပွတ်ဆန်၏ကီလို. ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆန်ကအရည်အသွေးမြင့်တယ်, တစ်ကီလိုကို P42 မှာရောင်းမှာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းတန်ဖိုးကတော့ P163,000 ဖြစ်ပါတယ်. ကြိတ်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ်သည် P7,800 သာရှိသဖြင့်၎င်းတို့၏ဆန်စပါးကြိတ်ခွဲပြီးစီးပွားဖြစ်ဆန်နှင့်အတူတူရောင်းသောလယ်သမားများအတွက် P53,200 ဝင်ငွေတိုးလာသည်။.
ဆန်စက်လုပ်ငန်းသို့မ ၀ င်ရောက်မီ, ပတ် ၀ န်းကျင်၌ဆန်စက်တစ်လုံးရှာရန်အရေးကြီးသည်; ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပါ, ဆန်ကြိတ်ခွဲခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ခံစားရပြီးပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်မန်နေဂျာနှင့်တွေ့ဆုံပါ. သင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်စီစဉ်နေပြီးသင်ကြားပို့ချမှုအချို့လိုအပ်သည်ကိုသူတို့အားအသိပေးပါ။ စီးပွားရေးစတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လုပ်ငန်းစတင်ပြီးနောက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းလေ့လာသင့်သည်။. လိုအပ်သည့်ကိရိယာနှင့်လူအင်အားကိုရှာဖွေပါ. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တွင်ကြုံတွေ့ရမည့်အခက်အခဲများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုလေ့လာပါ. မထင်မှတ်သောအန္တရာယ်များကိုမည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်ပြီးစိန်ခေါ်မှုများကိုမည်သို့ကျော်လွှားရမည်ကိုရှာဖွေပါ.
သင်၏ဆန်စက်လုပ်ငန်းအတွက်စီးပွားရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရန်အလွန်အရေးကြီးသည်, ၎င်းသည်သင့်အားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအစကောင်းအောင်စလုပ်ပြီးနောက်မှထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်လမ်းပြလိမ့်မည်. သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသို့မဟုတ်ချေးငှားသူများထံသို့သင်ချဉ်းကပ်သောအခါသင်၏စီးပွားရေးအစီအစဉ်သည်လည်းအသုံးဝင်လိမ့်မည်။ သင်၏စီးပွားရေးအစီအစဉ်သည်သင်၏စီးပွားရေးပန်းတိုင်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြလိမ့်မည်။, startup နှင့်ကုန်ကျစရိတ် running လိုအပ်သည်, ပထမ ဦး ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်ကျော်ဝင်ငွေရရှိမှုခန့်မှန်း, လိုအပ်သောဝန်ထမ်းများ, သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်စျေးကွက်နှင့်စျေးကွက်၏စေ့စေ့စပ်စပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ပြိုင်ပွဲ, သင့်ရဲ့စျေးကွက်မဟာဗျူဟာနှင့်ထူးခြားသောအရောင်းရဆုံးအချက်, နှင့်သင်၏ထွက်ပေါက် Strategy.it သည်ဖိလစ်ပိုင်၌ဆန်ကြိတ်ခွဲလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ရန်အတွက်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်.
ကမ္ဘာ့နေရာအားလုံးနီးပါး၌, မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုစတင်ရန်လိုင်စင်နှင့်စီးပွားရေးပါမစ်များရယူရန်လိုအပ်သည်. သို့သော်, ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအကြားလိုအပ်သောလိုင်စင်နှင့်ခွင့်ပြုချက်များကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဆန်စက်လုပ်ငန်းမစတင်မီသင်ရရှိရန်လိုအပ်မည့်လိုင်စင်နှင့်ခွင့်ပြုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်ရှိသင့်လျော်သောအေဂျင်စီသို့သွားရောက်ခြင်းကပိုကောင်းသည်။. ပိုကောင်းသေးတယ်, အေဂျင်စီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပါသို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ကျွမ်းကျင်သောရှေ့နေတစ်ယောက်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ.
ကောင်းမွန်သောတည်နေရာသည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုအောင်မြင်မှုအတွက်မရှိသလောက်ဖြစ်သည်. သင်၏ဆန်စက်လုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာမှာကုန်တင်ကားများနှင့်အခြားမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ဤအရာများကိုသင်၏ဆန်စက်အားနှင့်သင်၏ဆန်ကိုသယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်, သင်၏ဆန်စက်လုပ်ငန်းတည်နေရာကိုရွေးချယ်သောအခါ, သင်၏စီးပွားရေးကိုနေ့စဉ်လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည့်လျှပ်စစ်နှင့်အခြားအသုံးအဆောင်များကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်.
ဆန်စက်လုပ်ငန်းတွင်အဓိကကျသောစက်ကိရိယာမှာဆန်စက်ဖြစ်သည်. ဤစက်သည်ဆန်စပါးကိုစားသုံးနိုင်သောပုံစံဖြင့်ထုတ်လုပ်ရန်စပါးကုန်ကြမ်းများကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။ တရုတ်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများမှသင်တင်သွင်းနိုင်သောဆန်စက်, ဘယ်မှာစက်တွေများသောအားဖြင့်အတော်လေးလျှော့စျေးနှုန်းများမှာထုတ်လုပ်ပြီးရောင်းချကြသည်.
သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခြားသူများကိုငှားရမ်းရန်လိုအပ်သည်. ဥပမာ, သင့်အနေဖြင့်ဆန်ကုန်ကြမ်းနှင့်ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်များကိုသယ်ဆောင်မည့်အလုပ်သမားများလိုအပ်သည်, သင်၏ဆန်စက်စက်၏စက်စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍.